Dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhoco gobolka Mudug, dhimashada oo laba ruux dhaaftay xilli ciidanka Puntland & Galmudug ay saaaka..
October 18, 2020 Xuseen 5
Wararkii ugu dambeeyey ee aanu ka helayno deegaanka Saaxo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in malayshiyaad hhubaysani ay habeenimadii xalay ahayd deegaanka ku dileen laba ruux oo kamid ahaa dadka kunool dhul daaqsimeedka Saaxo.
Allaha u naxariistee labada ruux oo malayshiyaadka hubaysani ay dileen ayaa waxaa la sheegay inay kamid ahaayeen xoolo dhaqatada deegaankaasi, waxaana dadka deegaanku sheegeen in dhacdadaan loo aanaynayo aargoosi qabiil.
Xiisad dagaal oo u dhaxeysa laba beelood oo walaalo ah ayaa ka taagnayd saaxo iyadoona ay gaareen Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda gaar ahaan kuwa Xasilinta Gobolka Mudug oo ah cutub isku dhaf ah oo horay loogu diyaariyay maareynta xiisadaha beelaha ka dhex dhaca ee kusoo lab laabta gobolka Mudug.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka gobolka Mudug ayaa sidoo kale la filayaa inay gaaraan deegaanka Saaxo si xal looga gaaro xiisadda ka taagan, waxaana sidoo kale socda dedaalo waxgaradka deegaanku ku doonayaan in looga baaqsado khasaaro dheeri ah.
Mareexaank deegaanadaa ku nool waxaay u qeybsameen, WEGERDHAC oo aay YEEY nolosha ku coneeysa, iyo REER DIINI oo sida Idihii indhaha ka fiirsanaya,oo sugaya inta iyada laga and soo jeesanaya.Dhanka kalena Kismaayo iyo Jubaland oo aanay weligood qabsan karin, lahayna, naftooda ku sasabayo in aay qabsan doonaan!!!!!!
Qabiilkii aay hoggaaninta ka xumaato, isha uu Mareexaan GalMudug leeyahay ayuu yeeshaa, taas oo Gedona lala damacsan yahay!!!
dhulka Saxo wa Degaan Besha Wagardhac,30 sano waxa ku socdey Dagaal kaga imanayey Belaha Habargidir,dhulki loyiqin wagardhac wa laga bara kiciyey,sida Galinsor dhabad,habargidir oo dhan aya isku bahaysatay,haderna wali lagama harin oo wa taas laleynayo,qolo uso gurmatay majirto.
Waxaa layaab leh mooryaantii Sacad ee Dhuusamareeb kasoo gadoodday, durba Saaxa iyo Wargardhac bay ku dhaqaaqeen; dhulballaarsi iyo inay xoog ku degaan gudaha xadka Itoobiya ayaa madaxmartay. Waa gartood sababtoo ah Gelinsoor baa u xalaaloobay.
Reer Diini 20 sano kahor ayuu ka baxay Mareexaan, kuna biiray ‘Isbahaysiga Dooxatada Jubba[land]’.
Allaha kala qaboojiyo dadku waa waalalo waa wil iyo abtigiis
Qabilku waa qurux dagal wil baa kudhintee wil kuma dhasho saaxo sacad maleh maraxana ma leh ee waa dhul somaliyeed in lawadaa dago buu qeyrka ku jiraaa walalayaal dowled baa ina deeqda
DEG DEG-Mid kamid ah wasiirada cusub oo dembi loo haysto & weeraro uu horay uga qayb qaatay